Ny varotra Smartwatch dia mitombo 42% manerantany | Androidsis
Ny tsenan'ny famantaranandro marani-tsaina sy ny fitafiana azo amin'ny ankapobeny dia nitombo nandritra ny fotoana kelikely. Azontsika atao ny mahita ny fitomboan'ny varotra manerantany, miaraka amin'ny fitomboana miavaka ihany koa. Izany no toe-javatra izay miverina indray amin'ny telovolana fahatelo amin'ity taona ity. Varotra Smartwatch nitombo tamin'ity indray mitoraka ity tamin'ny 42% raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa.
Apple dia mijanona, toy ny mahazatra, amin'ny lohan'ity fizarana tsena ity. Na dia hitantsika aza izany marika toa an'i Samsung no mahazo fanatrehana eo amin'ny tsenan'ny smartwatch, noho ny fandefasana azy. Raha ny marina dia efa am-bolana maro isika no nahita satria mahazo tombony ny marika koreana.
Amin'ity telovolana fahatelo amin'ny taona ity dia voahosotra ho mpivarotra tsara indrindra i Apple 6,8 tapitrisa ny totalin'ny varotra an'ny smartwatches anao. Varotra tsara ho an'ny orinasa amerikana, nanjakazaka tamin'ny tsena ity. Samsung dia efa mandray ny toerana faharoa, miaraka amin'ny fivarotana 1,9 tapitrisa.
Fitbit dia mijanona amin'ny laharana fahatelo, izao dia efa azon'i Google ny orinasaMahaliana ny mahita raha hitombo ny varotrao na tsia rehefa mandeha ny volana, satria tonga eo aminao ny famantaranandro vaovao. Ny varotra dia 1,1 tapitrisa tao anatin'izay telo volana izay.
Amin'ny ankapobeny, afaka jerentsika hoe firy ny marika marani-tsaina toy ny Samsung na Fitbit, iza no tsy mampiasa Wear OS amin'ny maha rafitra miasa azy ireo dia afaka nampitombo ny varony izy ireo. Ny tsenan'ny fiambenana amin'ny ankapobeny dia mitombo, ary amin'ny hafainganana ihany koa, noho izany dia mihamaro ny safidy azo isafidianana.
Na dia tsy afaka manoatra an'i Apple aza ny marika, izay raha ny marina ny marika izay nitombo indrindra ny varotra ary iza no nitombo indrindra tamin'ny fizarana tsena. Ka io ampahan'ny tsenan'ny smartwatch io dia mbola anjakan'ny orinasa amerikana sy ny Apple Watch. Mahazo marika toa anao ve ianao Xiaomi miaraka amin'ny famantaranandrony vaovao ovay ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny varotra Smartwatch dia mitombo 42% amin'ny telovolana fahatelo